पोखराकी यी महिलामा पनि देखियो कोरोन, २७ दिनअघि कुन देशबाट नेपाल आएकी थिइन उनी ? — Sanchar Kendra
पोखराकी यी महिलामा पनि देखियो कोरोन, २७ दिनअघि कुन देशबाट नेपाल आएकी थिइन उनी ?
उनीहरू तीनै जना चैत ४ गते राति १ बजे बेलायतबाट दोहा हुँदै काठमाडौं आएका थिए। दुवै संक्रमितअहिले पाटन अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा छन्। उता कैलालीकी ६५ वर्षीया कोरोना संक्रमित महिलासँगै वीरगञ्जबाट दाङ आएका तीनै जनाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
कोरोना विशेष अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले तीनै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनु दाङका लागि सुखद् भएको बताए। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीबाट नौ जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न मंगलबार काठमाडौं पठाइएको थियो । उनीहरूमध्ये कैलालीकी महिलासँगै यात्रा गरेका तीन जना र अर्का एक जना गरी चार जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
अन्यको रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको डा. शर्माले जानकारी दिए । सोमबार कैलालीकी ६५ वर्षीया एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । गत चैत ९ गते उनी, छोरा र नातेदारसहित १५ जना भारतको बिहारबाट वीरगञ्ज आइपुगेका थिए । त्यस रात वीरगञ्जमै बसेका उनीहरूलाई अर्को दिन स्थानीय प्रशासनले कैलाली पठाइदिएको थियो ।
त्यस्तै र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ नतिजा देखिएको गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाका युवकमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ । बुधबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको गोरखा अस्पतालका कोभिड १९ फोकल पर्सन नारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
मंगलबार आरुघाट गाउँपालिकामा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट परीक्षण गर्दा आरुघाट गाउँपालिका ५ का ३१ वर्षका एक युवकमा एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसपछि उनलाई गाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । उनी गत फागुन २२ गते बहराइनबाट फर्किएका थिए ।